March 1, 2020 - Myitter
အမြန်လမ်း မိုင်တိုင် 262-6 မှာ သားအမိ နှစ်ယောက် ကားကိုတားတော့ ရပ်ပေးလိုက်သောအခါ…
March 1, 2020 Myitter 0
28.2.2020 ရက်နေ့ နေပြည်တော်ကနေ မန်းလေးကို အမြန်လမ်းကနေအသွား နတ်မောက်လမ်းခွဲအကျော် မိုင်တိုင် 262-6 မှာ သားအမိ နှစ်ယောက် ကားကို တားတော့ ရပ်ပေးလိုက်ပြီး …. အကျိုးအကြောင်း‌မေးတော့ မန်းလေးကို သွားချင်တာ မန်းလေးကတဆင့် မြစ်ကြီးနားကို သွားဖို့ လမ်း စရိတ်ပြတ်လို့ ပျော်ဘွယ်ကနေ လမ်းလျှောက်လာတာလို့ပြောတယ် […]
(၁၃) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းဆု သိန်း ၅၀၀၀ ဆုကံထူးရှင်
Zawgyi (၁၃) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းဆု သိန်း ၅၀၀၀ ဆုကံထူးရှင် အောင်ကောင်းဆင့်ရဲ့ သိန်း ၅၀၀၀ ဆုကြီး ကဃ-၉၆၄၅၇၂ ကံထူးရှင် ဦးကျော်ဝင်း/ဆားကျင်း/ မုံရွာ Myanmar_Online_News unicode version (၁၃) ကွိမျမွောကျ အောငျဘာလေ သိနျးဆု သိနျး ၅၀၀၀ […]
စာမေးပွဲဖြေကာနီးမှာ ထီ သိန်းတစ်ထောင် ကံထူးသွားတဲ့ (၁၀)တန်းကျောင်းသူလေး …
ပခုက္ကူကိုင်းရွာကဆယ်တန်းကျောင်းသူလေးမခင်သန္တာထွန်း ၁၃ ကြိမ်ျေမာက် သိန်း1000ကံထူးရှင်ျဖစ္ပါတယ် ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကြီးကိုလဲဂုဏ်ထူးများစွာဖြင့်အောင်မြင်ပါစေရွှေတန့်တစ် သရက္ခန် ဘုရားကဒေါ်မာမာမြင့် မိုးယံရွှေလမင်းနှင့်မြတ်ဆုကုဋေထီဆိုင်ကဆွတ်ခူးပေးလိုက်ပါပြီနော်။ ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်။နောက်လဲ ဆုကြီးများစွာကို ဆွတ်ခူးအောင်ရောင်းချနိုင်ပါစေ။ credit YomaLan unicode version ပခုက်ကူကိုငျးရှာကဆယျတနျးကြောငျးသူလေးမခငျသန်တာထှနျး ၁၃ ကွိမျမြောကျ သိနျး1000ကံထူးရှငျ ဖြစ်ပါတယျ ဆယျတနျးစာမေးပှဲကွီးကိုလဲဂုဏျထူးမြားစှာဖွငျ့အောငျမွငျပါစရှေတေနျ့တဈ သရက်ခနျ ဘုရားကဒျေါမာမာမွငျ့ မိုးယံရှလေမငျးနှငျ့မွတျဆုကုဋထေီဆိုငျကဆှတျခူးပေးလိုကျပါပွီနျော။ […]
ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ထီဆု မန္တလေးမှ တွန်းလှည်းဖြင့် ထီရောင်းသူ ဆွတ်ခူး ….
ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ထီဆု မန္တလေးမှ တွန်းလှည်းဖြင့် ထီရောင်းသူ ဆွတ်ခူး ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ထီဆုကို မန္တလေးမြို့မှ တွန်းလှည်းဖြင့် ထီရောင်းသူတစ်ဦးက ဆွတ်ခူးသွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ရောင်းမကုန်သည့် ထီလက်ကျန် (၁၀)စောင်တွဲမှ ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ထီဆု ဆွတ်ခူးခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ထီပေါက်သူ မအေးခိုင်က Mandalay In-depth News […]
၁၃ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ် တိုက်ရန် ….
၁.၃.၂၀၂၀ရက်နေ့ (၁၃)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် ဒီpostအောက်မှာ အစ အဆုံး တင်ပေးမှာဖြစ်လို့ like&shareလုပ်ပေးထားပါခင်ဗျာ… သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆု ဠ ၂၇၇၄၆၅ သိန်းတစ်သောင်း ဠ ၁၀၆၈၉၆ သိန်းငါးထောင် ယ ၄၃၅၅၈၀ ကဃ ၉၆၄၅၇၂ သိန်း(၂၀၀၀) င ၁၆၄၇၅၁ တ ၁၆၁၀၁၅ ကက […]